Sizihambisa Kanjani Ngokwethu Ukufakwa Kwe-WordPress | Martech Zone
Ungathanda ukucabanga ukuthi ukuhambisa isiza sakho se-WordPress usuka komunye umphathi usiya kwenye kulula impela, kepha kungakhungathekisa ngempela. Besisiza ngokoqobo iklayenti izolo ebusuku elithathe isinqumo sokusuka komunye umphathi liye komunye futhi ngokushesha laphenduka iseshini yokuxazulula inkinga. Benze lokho abantu abazokwenza ngokujwayelekile - bavimbe konke ukufakwa, bathumela i-database, bayithuthela kuseva entsha futhi bangenisa i-database. Kwase kwenzeka… ikhasi elingenalutho.
Inkinga ukuthi bonke abaphathi abakhiwe ngokulingana. Iningi linezinhlobo ezahlukahlukene ze-Apache ezinamamojula ahlukile asebenzayo. Abanye banezinkinga zemvume emnandi kakhulu ezidala izinkinga ngokulayisha amafayela, abenze afundwe kuphela, futhi abangele izingqinamba zokulayisha isithombe. Abanye banezinhlobo ezihlukile ze-PHP ne-MySQL - inkinga esabekayo embonini yokubamba. Ezinye izipele zifaka amafayela afihliwe enza umonakalo kusingathi esehlukile ngenxa yokulondolozwa kwesikhashana nokuphathelene nokuqondisa kabusha kumaseva.
Futhi-ke, lokhu akubandakanyi ukulinganiselwa kokulayisha ifayela. Lowo udaba lokuqala uma unokufakwa okunamandla kweWordPress… ifayili ledatha limane nje likhulu kakhulu ukuthi ungalilayisha futhi ulingenise ngomlawuli we-MySQL.
Kunamathuluzi amahle angaphandle okusiza, njenge I-CMS iye ku-CMS. Ungasebenzisa futhi i-Automattic's VaultPress service - vele wenze isipele isiza, ufake i-WordPress entsha ku-host entsha, faka i-VaultPress kabusha, bese uthola isiza. Laba bantu benze umsebenzi omuhle ekusebenzeni ngezinkinga eziningi ozohlangana nazo lapho uzama ukuhambisa iwebhusayithi.
Kodwa-ke, sithambekele ekuhambeni sodwa kulezi zinto futhi, okubuhlungu ukuthi, kaningi sizenza ngokwethu. Ngithanda into entsha yokufaka lapho uthuthela kumsingathi omusha kunokuba uhudule noma yiziphi izinkinga ngathi. Nazi izinyathelo esizisebenzisayo:
We yenza isipele konke ukufakwa bese uyayilanda endaweni ukuze uyigcine ngokuphepha.
We thekelisa i-database (akufakiwe njalo nezipele) bese uyilanda endaweni ukuze igcinwe ngokuphephile.
We faka i-WordPress entsha kuseva entsha bese uyithola isebenza.
We engeza ama-plugins ngasikhathi sinye ukuqinisekisa ukuthi konke kuyahambisana futhi kuyasebenza. Abanye abathuthukisi be-plugin benze umsebenzi omuhle ngokufaka izilungiselelo zabo kuthuluzi lokuthekelisa noma ngokunikeza izilungiselelo zabo zokuthekelisa nokungenisa.
We thekelisa okuqukethwe kusuka kusayithi ekhona usebenzisa ithuluzi lokuthumela ngaphandle le-WordPress elakhelwe ngaphakathi kwi-WordPress.
We ngenisa lokho okuqukethwe kusayithi elisha kusetshenziswa ithuluzi lokungenisa i-WordPress elakhelwe ngaphakathi kwi-WordPress. Lokhu kudinga ukuthi ungeze abasebenzisi… kancane okubandayo kepha kuwufanele umzamo.
We FTP amafolda e-wp-content / uploads lapho zonke izimpahla zethu zamafayela alayishiwe ziseva entsha, kuqinisekiswa izimvume zefayela ezisethwe kahle.
Sibeka i- izilungiselelo ze-permalinks.
We zip itimu bese uyifaka usebenzisa isifaki setimu ye-WordPress.
Sibeka ingqikithi bukhoma futhi yakha kabusha amamenyu.
We yenza futhi amawijethi bese ukopisha / unamathisela okuqukethwe njengoba kudingeka kusuka kwiseva endala kuye kweseva entsha.
We khasa isiza ukubheka noma yiziphi izingqinamba ezinamafayela angekho.
We buyekeza ngesandla wonke amakhasi yesiza ukuqinisekisa ukuthi konke kubukeka kukuhle.
Uma konke kubukeka kukuhle, sizokwenza njalo buyekeza izilungiselelo zethu ze-DNS ukukhomba umphathi omusha bese uhlala bukhoma.
Sizoqinisekisa ukuthi Vimba ukusethwa kosesho kuzilungiselelo zokufunda kukhutshaziwe.
Sengeza noma yikuphi I-CDN noma i-caching izindlela ezivunyelwe kumphathi omusha ukwenza isiza sisheshe. Kwesinye isikhathi lokhu kuyi-plugin, kwesinye isikhathi kuyingxenye yamathuluzi omphathi.
Sizokwenza bhala kabusha isiza ngamathuluzi we-Webmasters ' ukubona ukuthi kukhona yini izinkinga i-Google ezibonayo.
Sizomgcina umgcini wakudala isikhathi esingangesonto noma ngaphezulu… uma kungenzeka kube nenkinga ethile eyinhlekelele. Ngemuva kwesonto noma ukusebenza kahle, sizokhubaza umphathi omdala futhi sivale i-akhawunti.
Tags: i-wordpress yokusekelayocms kuye ku-cmsungathutha kanjani i-wordpresshambisa i-WordPresshambisa iwebhusayithihambisa i-wordpressfaka i-wordpress kabushabuyisela i-wordpressVaultPressi-wordpress isipelei-wordpress buyiselai-zip wordpress